Muxuu Yahay Magaca Caan Bixinta IP-ga Sideebayna Dhibcahaaga IP-ga u Saameynayaan Soo-Saarista Email-kaaga? | Martech Zone
Marka ay timaado dirista emayllada iyo bilaabista ololeyaasha suuqgeynta iimaylka, ururkaaga ayaa ah IP dhibcaha, ama Sumcadda IP, waa mid aad muhiim u ah. Sidoo kale loo yaqaan a dhibcaha diraha, Magaca IP-ga wuxuu saameyn ku yeeshaa soo-gudbinta emaylka, tanina waxay aasaas u tahay ololeynta emaylka guuleysta, iyo sidoo kale xiriirka ballaaran.
Maqaalkan, waxaan ku baareynaa dhibcaha IP si faahfaahsan waxaanan eegeynaa sida aad u ilaalin karto sumcadda adag ee IP.
Waa Maxay IP Dhibic ama Sumcad IP?
Dhibcaha IP-ga ayaa ah dhibco la xiriira sumcadda dirista cinwaanka IP-ga. Waxay ka caawisaa adeeg bixiyeyaasha inay qiimeeyaan haddii e-maylkaagu ka dhigayo inuu dhaafo filter-ka spam. Dhibcahaaga IP way isbeddeli karaan iyadoo kuxiran arrimo kala duwan, oo ay ku jiraan cabashooyinka qaatayaasha iyo inta jeer ee aad dirto emayllada.
Muxuu Sumcadda IP-ga muhiim u yahay?
Dhibcaha IP-ga ee xoogan waxay ka dhigan tahay in laguu tixgeliyo ilo aamin ah. Tani waxay ka dhigan tahay in emaylladaadu ay gaari doonaan kuwii aad damacsanayd iyo ololahaaga emaylka sidaa darteed waxay u tahay fursad weyn wax-ku-oolnimada Taa bedelkeeda, haddii saldhigga macaamiishaadu ay si joogto ah u ogeysiiyaan emaylka ka socda ururkaaga galka galka, waxay bilaabi kartaa inay kobciso sawir xun oo shirkadda ah, oo saameyn muddo dheer ah yeelan kara.
Sidee Sumcadaada IP-ga ay u Saameysaa Soo-Saarista Emailka?
Sumcadda IP-ka diraha ayaa qayb ka ah habka go'aan looga gaadhayo in emaylku gaadho mailkooda ama spam galka. Sumcad liidata waxay ka dhigan tahay in e-mayladaada ay u badan tahay in lagu calaamadeeyo inay yihiin spam, ama mararka qaarkood gebi ahaanba la diiday. Tani waxay ku yeelan kartaa cawaaqib dhab ah ururka. Haddii aad rabto inaad ku kalsoonaato soo gudbinta emaylkaaga, ilaalinta sumcadda diraha oo aad u muhiim ah.
Waa Maxay Farqiga U Dhaxeeya Cinwaanka IP-ga ah iyo cinwaanka IP-ga la Wadaago?
Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in inta badan adeeg bixiyaasha emaylka aysan bixin a u go'ay Cinwaanka IP-ga ee xisaab kasta. Si kale haddii loo dhigo, koontadaada dirista waa la wadaago xisaabaadka emailka badan. Tani waxay noqon kartaa mid wanaagsan ama xun iyadoo kuxiran sumcada IP Address:
No Sumcad IP - U dirista tiro badan oo emayl ah cinwaan cusub oo IP ah oo aan sumcad lahayn waxay run ahaantii kaa joojin kartaa emaylladaada, oo loo rogaa faylka qashinka ah… ama cinwaankaaga IP-ga isla markiiba waa la xiraa haddii qofna ku soo sheego emailka inuu yahay SPAM.
Sumcad Wadaag IP ah - Sumcadda Cinwaanka IP-ga La Wadaago daruuri maahan wax xun. Haddii aadan ahayn farriin-diye weyn oo aad iska diiwaangeliso koonto bixiyaha adeegga iimayl sumcad leh, waxay ku qasan doonaan emaylladaada kuwa kale ee sumcadda diraya si loo hubiyo in iimaylkaaga si habboon loo gaarsiiyo. Dabcan, waxaad sidoo kale dhibaato ku geli kartaa adeeg aan sumcad lahayn oo u oggolaanaya SPAMMER inuu ku diro isla Cinwaanka IP-ga.
Sumcad sumcad IP ah - Haddii aad tahay farriin-celiye weyn… caadi ahaan 100,000 oo macaamiil ah dirkiiba, Cinwaanka IP-ga ah ayaa ugu fiican si loo hubiyo inaad ilaalin karto sumcaddaada. Si kastaba ha noqotee, Cinwaanada IP waxay u baahan yihiin diirimaadHannaan aad ugu dirto Bixiyeyaasha Adeegga Internet-ka ee gaarka ah mug gaar ah oo ah kuwa ugu badan ee macaamiisha kuu ah in muddo ah si ay ugu caddeeyaan ISP inaad sumcad ku leedahay.
Sideed U Hubaa Sumcad Sare oo IP ah?
Waxaa jira arrimo kala duwan markay tahay go'aaminta iyo ilaalinta sumcaddaada IP. U oggolaanshaha macaamiisha inay si fudud uga saaraan cinwaannadaada haddii ay doonayaan waa hal tallaabo oo aad qaadi karto; tani waxay yareyn doontaa cabashooyinka spam ee ku saabsan emaylladaada. Fiiro gaar ah u yeelo inta emayl ee aad dirto iyo inta jeer ee aad u dirto sidoo kale - dirista kuwa badan oo isdaba joog ah waxay dhaawici kartaa sumcaddaada IP.
Tallaabo kale oo faa'iido leh ayaa ah in la xaqiijiyo liisaska emaylkaaga adoo adeegsanaya habka ikhtiyaariga ah ama si joogto ah looga saarayo cinwaannada emaylka ee ka soo baxa liiskaaga dirista. Dhibcahaaga saxda ah had iyo jeer way is beddeli doonaan waqti ka dib, laakiin qaadista tallaabooyinkan waxay ka caawin doontaa inay sii ahaato mid xoog leh intii suurtagal ah.
Sideed Ugu Abuuri Kartaa Sumcad Xoog Leh Saynis Cusub?
Haddii aad u diraysid farriimo fara badan adoo adeegsanaya adeegga boostadaada, ama aad iska diiwaangelisay Adeeg Bixiye Email oo cusub, Kulaylka IP-ga ayaa ah hababka aad ugu baahan tahay inaad ku abuurto sumcad bilow ah, xoog leh cinwaankaaga IP-ga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan kululaynta IP
Qalabka Lagu Hubinayo Sumcad IP
Barnaamijyo kala duwan ayaa hadda la heli karaa oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u hubiso sumcaddaada IP; waxaad ka heli kartaa tan faa iidada leh ka hor ololaha suuq geynta ballaaran. Qaar ka mid ah softiweerradu waxay sidoo kale ku siin karaan hagitaan ku saabsan siyaabaha lagu hagaajinayo dhibcaha soo dirahaaga markaad horay u socoto. Waa kuwan qaar ka mid ah si aad u bilowdo:
SenderScore - Xaqiijinta SenderScore waa cabbiraadda sumcaddaada, laga soo bilaabo 0 illaa 100. Markasta oo dhibcahaagu sarreeyaan, ayaa sumcaddaadu ka sii fiicantahay, oo caadi ahaan waxay sare u kacdaa fursadaha emaylkaaga laguugu soo diro sanduuqa sanduuqa halkii laga heli lahaa galka qashinka. SenderScore waxaa lagu xisaabiyaa celcelis 30-maalin celcelis ah waxayna ku kala sarreysaa cinwaankaaga IP-ga cinwaanada kale ee IP-ga.
Xarunta dhexe ee Barracuda - Shabakadaha Barracuda waxay bixiyaan IP-ga iyo raadinta sumcadda labadaba iyagoo adeegsanaya Nidaamka Sumcadda ee Barracuda; kaydinta waqtiga-dhabta ah ee cinwaanada IP leh saboolka ah or wanaagsan sumcad.
Shabakada Aaminaada - oo ay maamusho McAfee, TrustedSource waxay bixisaa macluumaad ku saabsan emailkaaga iyo sumcadda websaydhka labadaba.
Qalabka Boostada Google - Google waxay u soo bandhigeysaa Qalabkeeda Boostada kuwa soo diraya taas oo kuu oggolaaneysa inaad la socoto xogta ku saabsan muggaaga sarreeya ee aad u dirayso Gmail Waxay bixiyaan macluumaad ay ka mid yihiin sumcadda IP, magac domain, khaladaadka gudbinta Gmail, iyo inbadan.
Microsoft SNDS - Si la mid ah Qalabka Boostada ee Google, Microsoft waxay bixisaa adeeg la yiraahdo Adeegyada Xogta Shabakadda Smart (SDNS). Xogta ay bixisay SNDS waxaa ka mid ah fahamka qodobbada xogta sida dirista sumcaddaada IP, imisa dabinno Microsoft ah oo aad u geynayso, iyo heerka cabashadaada spam.
Cisco Senderbase - Xog hanjabaad-waqtiga-dhabta ah ee ku saabsan IP, domain, ama shabakadaha si loo aqoonsado SPAM iyo emayl xun oo dira.
Haddii aad u baahan tahay caawimaad dheeraad ah oo ku saabsan sumcadda IP-gaaga ama emaylka la soo gaarsiin karo, nala soo xiriir si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Tags: shabakadaha barracudaadeeg bixiyaha adeegga emaylkagaar ahaanqalabka boostada googlemeelaynta sanduuqabixiyaha adeegga internetkacinwaanka IPMagaca cinwaanka IPDhibcaha cinwaanka IPsumcadda ipdhibcaha ipispdiraaminidansax ah
Maxay Tahay Waqtiga Ugu Fiican Ee La Diro E-maylladaada (Warshadayn)?